वारविक फोटो ग्यालरी (मेदेखि अगस्त २०१४ सम्म)
वारविक फोटो ग्यालरी भाग १ (मेदेखि अगस्त २०१४ सम्म)
यहोवाका साक्षीहरूले वारविक, न्यु योर्कमा उनीहरूको भविष्यको मुख्यालय निर्माण गर्दै छन्‌। मेदेखि अगस्त २०१४ सम्म निर्माणकर्मीहरूले सवारीसाधन मर्मत भवन, प्रशासनिक कार्यालय/सेवा भवन अनि ‘ग’ र ‘घ’ आवास भवनको द्रुत गतिमा निर्माण गरे। यसको केही झलक फोटो ग्यालरीमा पाइन्छ।
वारविकको निर्माणकार्य सम्पन्न भएपछि यस्तो देखिन्छ। माथि बायाँदेखि घडी घुम्ने दिशामा:
२. घुम्न आउनेहरूको पार्किङ्‌ भवन
३. मर्मतकार्य गरिने भवन/आवासमा बस्नेहरूको पार्किङ्‌
८. प्रशासनिक कार्यालय/सेवा भवन
मे १, २०१४—वारविक निर्माणस्थल
दक्षिण-पश्‍चिम भागबाटको दृश्य, ‘स्टरलिङ फरेस्ट लेक’-बाट (ब्लु लेक) उत्तरतिरको दृश्य। अगाडिपट्टि ‘घ’ आवासको बेसमेन्टमा काम गरिंदै। लेकको छेउमा ‘ग’ आवासको लागि ब्लक तयार पारिंदै।
मे १४, २०१४—निर्माणस्थलबाहिर पूर्वनिर्माण केन्द्र
निर्माणकर्मीहरू आवास भवनको लागि ‘पोड’ भनिने बाथरुम जडान गर्दै। पोडमा फ्रेम, भित्ता, धारा र विघुतसम्बन्धी सामाग्री, भेन्टिलेसन र बाथटब समावेश हुन्छ। यो पोडलाई भवनमा जडान गरेपछि बाथरुमको काम सिद्धिन्छ।
मे २२, २०१४—सवारीसाधन मर्मत भवन
धारापानीको काम गर्नेहरू भुइँतलामा काम गर्दै। निर्माणकार्यको दौडान लगभग ५०० कामदारले यस कोठामा भोजन खानेछन्‌ र थप ३०० जनाले यस भवनको अरू ठाउँमा खानेछन्‌। निर्माणकार्यको अन्ततिर अस्थायी भोजनकक्ष हटाइनेछ र यस भवनलाई सवारीसाधन मर्मतको लागि प्रयोग गरिनेछ।
जून २, २०१४—सवारीसाधन मर्मत भवन
छतमा लगाइने बोटबिरुवाको लागि विशेष तरिकामा तयार पारिएको माटो हाल्दै। यसरी छतमा बोटबिरुवा लगाउँदा यसले उर्जाको प्रयोग घटाएर वातावरणलाई मदत गर्छ, घनघोर वर्षा हुँदा पानी बिस्तारै बग्छ र पानीसँगै मिसिएर आउने प्रदुषण गराउने तत्त्वलाई छान्ने काम गर्छ।
जून ५, २०१४—प्रशासनिक कार्यालय/सेवा भवन
यो भवन तीन वटा भवन जोडेर बनाइनेछ, जसको क्षेत्रफल ४२,००० वर्गमिटर छ। बाहिरका कामदारहरू पिल्लरको लागि छड बाँध्दै।
जून १८, २०१४—सवारीसाधन मर्मत भवन
कामदारहरू छानामा अलकत्राबाट बनाइएको असफल्ट राख्नको लागि प्रोपेन टर्च प्रयोग गर्दै। लडेर दुर्घटना नहोस् भनेर तिनीहरूले सुरक्षाको लागि जीउमा बेल्ट लगाएका छन्‌।
जून २४, २०१४—‘ग’ आवास
कोठा तातो-चिसो बनाउने पहिल्यै तयार पारिएको साधन र तापमान सन्तुलनमा राख्ने प्रणाली (HVAC) जडान गर्दै। वारविक निर्माणकार्यमा भाग लिने ३५ प्रतिशतजति साक्षीहरू महिला हुन्‌।
जुलाई ११, २०१४—मन्टगमरी, न्यु योर्क
स्टोर र पूर्वनिर्माण केन्द्रको रूपमा प्रयोग गरिने यस भवनलाई फेब्रुअरी २०१४ मा लिइएको थियो। भवनभित्रको क्षेत्रफल २०,००० वर्गमिटर छ। तस्बिरको पछाडीतिर दायाँपट्टि भएको सेतो सामान बाथरुम पोड हो; बाथरुम पोडलाई पठाउनको लागि तयार अवस्थामा राखिएको छ।
जुलाई २४, २०१४—‘ग’ आवास
भवनको उत्तर-पूर्वी भाग तस्बिरमा देखाइएको छ। यस भवनमा मुख्यालयका लगभग २०० जना सदस्य बस्नेछन्‌। प्रायजसो कोठा ३० देखि ५५ वर्गमिटर क्षेत्रफलको हुनेछ जसमा भान्छा, बाथरुम र सानो बार्दली पनि समावेश हुन्छ।
जुलाई २५, २०१४—मर्मतकार्य गरिने भवन/आवासमा बस्नेहरूको पार्किङ्‌
निर्माणस्थललाई निर्माणकार्यको लागि तयार पारिंदै। तस्बिरको पछिल्तिर बायाँबट्टि ढुङ्‌गा कुट्‌ने मेसिनले जमिनबाट निकालिएको कुरालाई पछि प्रयोग गर्नको लागि तयार पार्दै। निर्माणकार्य सिद्धिने बेलासम्म वारविक निर्माणस्थलबाट लगभग २,६०,००० घनमिटर माटो हटाइनेछ। प्रत्येक दिन औसतमा माटो बोक्ने २३ वटा ट्रक प्रयोग गरिंदै छ।
जुलाई ३०, २०१४—सवारीसाधन मर्मत भवन
छतमा घाँस रोप्दै।
अगस्त ८, २०१४—वारविक निर्माणस्थल
ठूलो क्रेनबाट खिचेको तस्बिर। कार्यालय भवनबाट दक्षिण-पश्‍चिमतिरको दृश्य। तस्बिरको अघिल्तिर बायाँपट्टि घुम्न आउनेहरूको पार्किङ्‌ भवन छ जसको निर्माणकार्य सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले यहाँ हरेक दिन कामदारहरूको सवारीसाधन पार्किङ्‌ गरिन्छ। केही साक्षीहरू तीन-चार दिन काम गर्न एकतर्फी १२ घण्टासम्म गाडी चलाएर स्वयम्सेवा गर्न आउँछन्‌।
अगस्त १३, २०१४—सवारीसाधन मर्मत भवन
अस्थायी भोजनकक्षको रूपमा प्रयोग गरिएको यस ठाउँको निर्माणकार्य लगभग सिद्धिनै लागेको छ। भिडियो मनिटर (अहिलेसम्म जडान गरिएको छैन) र सिलिङमा राखिएको स्पिकरको मदतले यहाँ काम गरिरहेका कामदारहरूले शाखा कार्यालयमा सञ्चालन गरिने बिहानको उपासना र अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रमबाट लाभ उठाउँछन्‌।
अगस्त १४, २०१४—प्रशासनिक कार्यालय/सेवा भवन
पहिलो तला ढलान गर्दै। तस्बिरको दायाँतिर कामदारले मसला खुकुलो नहोस् र बीच-बीचमा खाली नहोस् भनेर भाइब्रेटर प्रयोग गर्दै।
भवनको बीचमा विघुतीय तारहरू घुसाउने पाइप मिलाउँदै। त्यसपछि यसलाई माथिबाट स्ल्याबले ढाकिन्छ।
पहिलो तला ढलान गरेर सिद्धिन लागेको अवस्थामा। यो वारविक निर्माणकार्यको अहिलेसम्मकै ठूलो ढलान हो। यसमा जम्माजम्मी ५४० घनमिटर मसला प्रयोग गरियो। निर्माणस्थलमा मेसिनद्वारा मसला तयार पारियो, मसला मिसाउने आठवटा ट्रक र दुइटा पम्पले मसला ओसाऱ्यो अनि साढे पाँच घण्टा लगाएर ढलान गरियो। तस्बिरको बीचमा भऱ्याङ।
अगस्त १४, २०१४—‘ग’ आवास
छतको बार निर्माण गर्दै। दायाँतिर ‘क’ आवासको बेसमेन्ट तयारि पारिंदै।
अगस्त १५, २०१४—‘ग’ आवास
बनाइसकेको बाथरुम पोडलाई क्रेनको सहायताले तेस्रो तलामा लगिंदै। वारविक निर्माणकार्यमा बनाइसकिएका सामानहरू अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरिएको छ। यसले गर्दा निर्माणस्थल खचाखच हुन पाउँदैन र फटाफट काम सम्पन्न हुन्छ।
अगस्त २०, २०१४—‘ग’ आवास
ठेकदारहरू पहिल्यै तयार पारिएको भित्ता जडान गर्दै। यसमा पहिल्यै रङ्‌ग लगाइसकेकोले रङ्‌ग लगाइराख्नु पर्दैन र मर्मत पनि त्यति गरिरहनु पर्दैन। यसलाई छिटै जडान गर्न सकिने भएकोले यसले निर्माणकार्य समयमै सिध्याउन मदत गर्छ।
अगस्त ३१, २०१४—वारविक निर्माणस्थल
निर्माणस्थलको दक्षिण-पश्‍चिमबाट खिचिएको तस्बिर। ‘घ’ आवासमा तला थप्न तयारी गरिंदै; त्यसको पछाडि ‘ग’ आवास जसको निर्माण लगभग सिद्धिन लागेको छ।
वारविक फोटो ग्यालरी भाग २ (सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बर २०१४ सम्म)